Solontenan'ny Advanced Exchange amin'ny Microsoft Exchange Server 2013
Ny vahaolana Advanced Corore an'ny Microsoft Exchange Server 2013 dia nahitana ny fahatsapana ny fahazoana ny fahaiza-manaony sy ny fampahalalana mba handrafetana sy hitantanana toe-javatra vaovao momba ny Microsoft Exchange Server 2013. Noho ny vintana azonao nanadihadiana tamin'ny fomba ofisialy ny Core Solutions amin'ny Microsoft Exchange Server 2013, dia afaka mandray ity programa ity ianao hanatsarana ny famoronana ny Exchange Server.
Ny vahaolana Advanced Core amin'ny adiresy Microsoft Exchange Server 2013 dia azo atao amin'ny alàlan'ny fanandramana hametrahana ny tetik'asa manampahaizana administrateur, ny manam-pahaizana IT, ary ny mpiasa fanampiana mpiasa izay mila mianatra ny Exchange Server 2013. Ny fianarana dia mampiseho anao ny fametrahana Exchange Server 2013 & manome toro lalana, teknika tsara indrindra, ary fandinihana mba hanampiana anao handefa Exchange Server kokoa. Ankoatra izany, ity programa ity dia soso-kevitra amin'ny fanomanana fitaovam-pitaovan'ny IT manam-pahaizana izay hiseho amin'ny Advanced Excel Microsoft Exchange Server 2013 fanadinana, na amin'ny maha-zava-dehibe ny fanamafisana ny Microsoft Exchange Server 2013 (MCSE). Raha toa ka miezaka ny misoratra anarana ianao, dia tsy tokony ho efa niasa nandritra ny taona 3 nandritra ny fotoam-piasan'ny IT - indrindra eo amin'ny sehatry ny fandaminana rafitra, rafitra rafitra na asa fanampiana. Amin'ny maha-tsikombakomba anao, dia andrasana hiara-miasa amin'ny Exchange Server 2013 ianao na ny hafa mandeha alohan'ny famoahana Exchange Server.
-> Inona no raisinao manoloana ny fizotran'ny fianarana?
Raha vao vita ny fianarana, dia hanana fahafahana ianao:
Ampidiro & ampidiro ny Unified Exchange Server 2013 Messaging.
Manaova drafitra virtoaly ho vonona ho an'ny tolotra Exchange Server 2013.
Ampifanaraho & manamboara fikirakirana avy amin'ny rafitra fampandehanana tsy alaina Exchange amin'ny Exchange Server, & fanatsarana ny mandeha alohan'ny Exchange Server.
Ampifanaroy sy ampiharina ny habaka Exchange Server 2013.
Ampifanaraho sy ampiharo ny hafatra fitaterana ny filaminana.
Ampifanaroy & manorata hafatra fiarovana ao amin'ny Exchange Server 2013.
Ampifanaroy sy ampiheno ny filaminana eo amin'ny sehatra Exchange Server 2013.
Ampifanaraho sy ampiharo ny fifanaraham-baovao.
Ampiharo ny interface interface sy ny -n'ny Windows PowerShell® 3.0 ho filohan'ny Exchange Server 2013.
Ampifanaraho ary ampiharo ny fampitam-baovao.
Ampifanaraho ary ampifanarahana amin'ny Exchange Online.
-> Inona no fitsipi-pifehezana manokana takiana mba hahafeno io fepetra io?
Ankoatra ny traik'efa matihanina, tokony hanana ny fahaiza-manao manokana ianao amin'ny fotoana tsy tokony hijanonanao amin'ity fandaharana ity:
Famaritana vaha-olana fototra momba ny fanamafisana ny Microsoft Exchange Server 2013, na programa ampahany
Tsy ampy latsaky ny roa taona amin'ny fiasana amin'ny Exchange Server
Tsy misy latsaky ny roa taona amin'ny fandraisana anjara amin'ny Windows Server, & Windows Server 2012 na Windows Server 2008 R2
Tsy ampy latsaky ny enim-bolana amin'ny fiasana amin'ny Exchange Server 2013 na Exchange Server 2010
Tsy ampy latsaky ny roa taona amin'ny fampiasana fahalalana amin'ny anarana famaritana ny anarana, laharana DNS
Tsy ampy latsaky ny roa taona amin'ny fampiasana fahalalana amin'ny Active Directory
Asa miasa miaraka amin'i Windows PowerShell
Miasa amin'ny rakitra, ohatra, PKI (Public Key Infrastructure) dokam-barotra
Raha toa ka mila mandeha any amin'io programa fiomanana io ianao, dia afaka manome fahafaham-po anao amin'ny fandehanana any amin'ny Core Solutions amin'ny Microsoft Exchange Server 2013 na amin'ny fahazoana fianarana sy fahaiza-mifandray. Ny soso-kevitra dia ny hifaneraseranao amin'ny fanomezan-dàlana manomana ny fanamafisana ireo fanamafisana ireo.
Microsoft Dynamics 365 | Fanamboarana CRM & ERP